ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » Libro အတွက်အိပ်မက်မက်ခြင်း: ဘယ်လိုနည်းနဲ့တစ်ဦးကောင်းခွေးများအတွက်ယဉ်မင်းဆိုးအချင်းမိန်းမ
အားဖြင့် Louise Bernikow
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: မေ. 20 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
ကျွန်တော်တို့ဝေးအငြိမ်းစားသို့မဟုတ် decrepitude မှနေဆဲသော်လည်း, Libro ငါအပူလှိုင်းတံပိုးမှကျရောက်နေတဲ့မြို့တမြို့၌နွေရာသီနီးကပ်လာပြီခဲ့ကြ, လေအေးစက်အသက်ရှင်လျက်ကျွန်တော်တို့ကိုသိုထားပေမယ့်တိုက်ခန်းမှာတံဆိပ်ခတ်ခြင်းကိုအဘယ်မှာရှိ.
Libro sizzling လမ်းဘေးစင်္ကြံပေါ်တွင်ခံစားခဲ့ရဘယ်လိုသိကျွမ်းအဘယ်မျှကာလပတ်လုံးငါသည်တကယ်အားလပ်ရက်ခဲ့ချင်ပါတယ်ကတည်းကကြောင့်ခဲ့, ငါသည်အဟုတ် '' ဟုပြောသည်’ မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏မိတ်ဆွေသြဂုတ်လတစ်လတစ်ခုမမျှော်လင့်ဘဲရရှိနိုင်သော Long Island ကျွန်းကမ်းခြေငှားရမ်းမှုအကြောင်းငါ့ကိုပြောတဲ့အခါ.
ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေရဲ့မိတ်ဆွေတစ်ဦးကကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်လူနှင့်အတူချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ပြိုလဲနှင့်ဆန်ဖရန်စ္စကိုအေးခဲနေသောမေတ္တာသည် East Coast တွင်သဲနှင့်လှိုင်း forgo ဖို့ဆန္ဒရှိခဲ့ဖူး. အသိုက်ကြက်ဥထဲသို့နှစ်, ကျွန်မသူ့ကိုထုတ်ကူညီခဲ့.
ငါမသဲပေါ်တွင်အခန်းထဲမှာတဦးမှဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ကောင်းတဲ့အဝါရောင်စောင်ကို တင်. Libro ပေါ်မှာထိုင်. ဒါဟာအစောပိုင်းရှိသေး, ဒါပေမယ့်ငါမမြေအောက်ခန်းတွင်တွေ့င့်အစိမ်းရောင်နှင့်အဖြူရောင်အစင်းကျားထီးတင်နှင့်ငယ်မင်းသားဟာသူ့ရဲ့အရိပ်ထဲတွင်လုံခြုံစိတ်ချစွာခဲ့သေချာဖန်ဆင်းတော်. ထိုအခါငါရေလှည့်လည်. သူကထနောက်တော်သို့လိုက်. ကျနော်တို့ချီတက်. ထိုအချိန်ကာလအားဖြင့်သာငါနွားသငယ်ကိုနက်ရှိုင်းခဲ့, Libro ရပ်တန့်ခဲ့ကြောင်းနှင့်လိုလားသောရှာဖွေနေခဲ့သည်. ငါ-ရပ်ကွက်သူ့ကိုတိုက်တွန်းခဲ့သည်. သူကငြင်းဆန်. ငါစောင်ထံသို့ပို့ပြန်စေ. သူကငြင်းဆန်. ကျွန်မသက်ပြင်းချခြင်းနှင့်ကောင်းကင်ယံမှကြည့်ရှု. သူသည်ငါ၌နောက်သို့မလိုက်လို; သူကုန်းတွင်းရေနံမနေလို. ကျနော်တို့မရှိသလောက်ဒီတစ်ခုတူအာဏာရုန်းကန်မှုများခဲ့, သူဒီလိုကောင်းတစ်ဦးကိုခွေးဖြစ်ခဲ့သည်များအားဖြင့်ကြောင့်ငါမျှမျှတတသူ့ကိုကုသကြောင့်, ထိန်းချုပ်မှုကိုကျင့်သုံးအတွက်ညီညွတ်သောနှင့်နိုင်လိုမင်းထက်မဖြစ်ခြင်း.
ငါခွေးကိုလူတစ်ဦးဖြစ်လာချင်ပါတယ်, နောက်ဆုံးမှာတော့. သို့သော်ရေတွင်ငါတို့ခြေနှင့်အတူရှေ့မတိုးနောက်မဆုတ်နဲ့အလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်မခံခဲ့ရ. ငါသည်တ dominatrix သို့ morphed, သူသည်စောင်မြော်လင့်သောတောင်းဆို, သူ့ရဲ့ထီးအောက်မှာသူသည်ရေ၌ငါ့ကိုအနားမှာလှော်ခတ်မလိုလျှင်. သူကအိမ်ပြန်အခြေစိုက်စခန်းငှါသွားကြ၏. ငါတယောက်တည်းထွက်ရေကူးသွားသည်. ဒါပေမယ့်ကမ်းခြေပေါ်တွင် Din ငါ့ကိုပြန်ပို့ဆွဲထုတ်. Libro တက်ပြိုင်ပွဲနှင့်ဆင်းခဲ့, ခှေးဟောငျ. ငါသည်ငါ၏လက်နက်နှင့်ခြေထောက်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတော်မူသောသူ၏စိတ်ချစေရန်ရေထွက်လာ၏, flailing မ
ကျနော်ကုန်းပေါ်မှာအဆိုပြုခြင်းကိုဖန်ဆင်း, ငါသည်သူ၏အရှေ့တော်မှထွက်နီးပါးရေကူးသွားသည်သော်လည်းတစ်ဦး madwoman တူ, ငါသည်အ terra firma ရန်နှင့်ကိုယ်တော်ထံသို့ပြန်လာပါလိမ့်မည်: ငါသည်သင်တို့ကိုစွန့်မည်မဟုတ်ပေ. ငါသည်သင်တို့ကိုစွန့်မည်မဟုတ်ပေ. Libro ငါ့ကိုမယုံကြဘူး. ကယ်ဆယ်ရေးလိုအပ်ခဲ့. ဒီပုံရသည်ဟုတက်ပြိုင်ပွဲနှင့်ကမ်းခြေဆင်းခြင်းနှင့်တပ်များစုရုံးမှမြည်လိုအပ်. ငါသည်အရေကူးသွားသည်ဆိုပါက, သူကြုံး; ငါရေထဲကလာလျှင်, သူကောင်းတစ်ဦးကိုခွေးကဲ့သို့စောင်ပေါ်မှာအိပ်.
၎င်းသည်အလွန်ပူနေ့ရက်ဖြစ်လေ၏. ငါသည်အမျက်တော် ထွက်. တယ်. ကျွန်မနှစ်သိမ့်တယ်. ကျနော်ကိုခြိမ်းခြောက်တယ်. ငါသည်သူ့ကိုကစ်နှင့်ပို့ချချက် ပေး. ကတိတော်များကိုအများကြီးဖန်ဆင်းတော်. အဘယ်အရာကိုမျှအလုပ်လုပ်ခဲ့. ငါပြန်ရေထဲသို့ သွား. မိမိ၌ရပြန်မှီတိုင်အောင်, အချက်ပေးကိရိယာအသံကိုလွှင့်ခြင်းငှါသွားကြ၏, ကုန်းပေါ်မှာသောနေ့ရက်ကာလကိုခံစားအခြားသူများကနှင်ချခံရခြင်း၏၌လည်းကြောက်မက်ဘွယ်သော, အိမ်မှာသူ့ကို ယူ. ,. နောက်ဆက်တွဲလက်ထက်တွင်, ငါရေကူးသွားနေစဉ်ကျွန်တော့်ဘေးကင်းလုံခြုံစွာလျှော့ချပြတင်းပေါက်နှင့်အတူကားထဲတွင်သူ့ကိုစွန့်ခွာကြိုးစားခဲ့, ဒါပေမဲ့သူမရှိကျိုးပဲ့စေ, လွန်းတောင်းဆို, ငါသည်အစဉ်ထိတ်လန့်ချထားရေးဟောင်, သူ၏အသက်တာ၏မေတ္တာကို, ရေကိုဝင်ကြ၏နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူယုံကြည်ဖို့ဆက်လက်အချို့သေဆုံးခဲ့ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်. နောက်ဆုံးမှာ, သူသည်အငှားအိမ်တော်၌နေရစ်ခဲ့ကြရသည်, ပင်ခေတ​​်အစားဆုံးရက်, အားလုံးကြမ်းပြင်ပရိသတ်တွေသူ့ကိုဝိုင်းပတ်နှင့်အတူ, ငါရေကူးချင်တယ်ဆိုရင်. ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြီးပြည့်စုံသောနားချင်းဆက်မှီအတွင်းပထမဦးဆုံးအလေးအနက်အကွဲအပြဲရောက်ရှိခဲ့, ငါ့ပျော်မွေ့ခြင်းအတော်ကိုအစဉ်မပြတ်ဘဲနေကြ၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအသိအမှတ်ပြုခြင်း, မသာမိမိအမိုင်း. တက်ကြွ Duo ရှိစေခြင်းငှါ, အချိန်များတွင်, ချမ်းသာမှသီးခြားလမ်းများ.